Masuuliyiin ka tirsan Gobolka Banaadir oo Booqday Jiidaha Dagaalka ee Muqdisho – SBC
Masuuliyiin ka tirsan Gobolka Banaadir oo Booqday Jiidaha Dagaalka ee Muqdisho
Gudoomiye ku xigeenka Dhinaca Amniga Maamulka gobolka Banaadir Ee DKMG ah Warsame joojax oo ay wehegeliso Gudoomiyaha Degmada Wardhiigley Deeqo ayaa booqasho ku tagay Furumada hore ee Fariisinka u ah Ciidamada Dowlada KMG ah ee SOomaaliya iyo kuwa Amisom .
Goobaha ay booqdeen waxaa ka mid ah gurigii Muqdisho uu ka degenaa Madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya Aadan C/dulle Xasan Aadan Cade ee ku yaala Degmada Wardhiigley, Wadada Wadnaha iyo Suuqa Xoolaha wardhiigelay.
Ujeedada Booqashadooda ayaa waxa ay ku aadaneyd sidii ay ugu kuurgali lahaayeen guulaha Ciidamada DKMG ah ee dhinaca Degmada Wardhiigley .
Sidoo kale gudoomiye ku xigeenka DHinaca Amniga Maamulka gobolka Banaadir Warsame Joojax waxa uu booqasho ku tagay jiidaha kale ee dagaalka ciidamada DKMG ah ay kaga jiraan Degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag.
Waxa uu sidookale sheegay mar uu saxafada kulahadlayay Jiida hore ee Dagaalka in Maamulka Gobolka Banaadir ay ka go’an tahay Xaqiijinta Amniga gobolka Banaadir, isagoona meesha ka saaray Su’aal ay Suxufiyiinta Weydiiyeen taas oo aheyd in ciidamada DKMG ay Gelidoonaan Suuqa Bakaaraha Maadaama ay kaabiga ku hayaan, isagoo sheegay in ciidamada DKMG ay ilaa xad ka war wareegi doonaan suuqa, balse hadii ay Shabaab ku qasbaan oo ay gabaad ka dhigtaan ay geli doonaan suuqa .
Ugu dambeyntii Booqashadan Maamulka gobolka Banaadir uu ku tagay Jiidaha hore ee Dagaalka ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xili uu maalintii sedaxaad u Muqdisho ka socdo dagaal ciidamada DKKMG ah iyo Alshabaab, ay dowladu u suurta gashay in ay gaaraan suuqa weyn ee Bakaaraha .